Zonke ii-samsung galaxy note 7 ze-smartphones ukuba zivinjelwe kwi-u. Iinqwelomoya zeenqwelo moya
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Zonke ii-smartphones ze-Samsung Galaxy Qaphela i-7 ziya kuthintelwa kwiinqwelomoya ze-US
Icaphula umntu oqhelene nesigqibo, iBloomberg inika ingxelo yokuba abasemagunyeni base-US bazakuzivala zonke ii-smartphones ze-Samsung Galaxy Note 7, ezinikwe amandla okanye hayi, kwiinqwelomoya. Izithintelo zokuhamba ngenqwelomoya zandiselwa kuzo zonke i-1.9 yezigidi zeenqaku ze-7 ezithengiswe e-United States, kwaye izixhobo azinakho ukuthwalwa ngenqwelomoya kwaphela. Isigqibo siza kubhengezwa ngokusesikweni liPayipi kunye noLawulo loKhuseleko lweeMpahla kunye ne-Federal Aviation Administration kungekudala.
Isamsung sele ikumisile ukuveliswa kwesixhobo, esineengxaki zokuqhushumba iibhetri ezibotshelelwe kwiziphene zoyilo lwehardware ezinje nge-chipset elungiselelwe ngokungalunganga ephethe ibhetri kunye neapos; inqaku lokutshaja ngokukhawuleza. Abanini beNqaku 7 bayabongozwa ukuba bayibuyisele endaweni yokuthenga enye i-smartphone ephezulu okanye ukubuyiselwa imali.
Ngelixa kungekho nto imisa abo banomdla wokubambelela kwi-phablet ekwenzeni njalo, izithintelo ezinje ngezo ziza kumiselwa ziya kwenza ubomi kunye nabo kube nzima kwiiflaya ezihamba rhoqo. Ewe, umngcipheko wengozi yomlilo yeyona nto iphambili ekujonganeni nayo, yiyo loo nto ukubuyisela iNqaku 7 kuyeyona nto isengqiqweni ukuyenza.
Ngelishwa, abanini bezinye ii-smartphones zeSamsung zamva nje, ezinje ngomda weGPS S7 banokujamelana nobunzima bokuhamba, njengoko izixhobo zinokubukeka okufanayo kwaye ayingabo bonke abasebenzi abaya kwazi ngokupheleleyo ukuba kuphela iNqaku 7 livinjelwe kwiinqwelomoya, ngokuchaseneyo, yithi, zonke 'iifowuni ze-Samsung Galaxy' okanye 'iifowuni ze-Samsung 7' okanye nantoni na eyenzekayo kukungaqondani. Okwangoku, ukungqina ukuba awuyiphathi i-Galaxy Qaphela 7 endaweni ye-S7 okanye i-S7 edge akufuneki ube yingxaki kakhulu.
Eyona nto iphambili yebhetri ye-iphone
Eyona nto intle nge-Apple iPad mini (2019) ngesivumelwano se-cyber yangoMvulo inokuba sele ilapha
Eyona smartwatches ilungileyo ngo-2021
Ungayibhalisa njani ngaphezu kweempepha zeminwe ezi-3 kwi-Samsung Galaxy Note 4 okanye kwi-Galaxy S5
Uyikhuphela kwaye uyifake njani i-beta ye-iOS 15 yonjiniyela
IJet Black Apple iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus ngoku ziya kuthumela ngo-Okthobha okanye ngo-Novemba